Public Kura | » नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ ? नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ ? – Public Kura
नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ ?
–डा. सिपी सेडाई
नराम्रो सपना देखिएमा अब के हुन्छ भनेर मनमनै त्राशमा बस्ने मान्यता छ। तर, सपनाका कुरामा विश्वास गर्नु भ्रम मात्र हो। सपनाको त्राशले मनमा अशान्ति पैदा गर्छ भने राम्रो सपना देख्दा मन पनि खुशी हुन्छ। त्यसैले सपना सुल्टो वा उल्टो जे पनि हुन सक्छ, सपना नराम्रो देख्दा कुनै खतरा हुँदैन। हाम्रो मस्तिस्क एउटा कम्प्युटर हो। यसमा धेरै कुरा रेकर्ड भएर रहेका हुन्छन्। मान्छे निद्रामा हुँदा पनि मस्तिस्क चाँहि अर्ध चेतन अवस्थामा हुन्छ। त्यसबेला सपनामा वर्षौदेखिका रेकर्डहरु फाइल टेप जस्तै गरि एक अर्कामा घुलमिल भएर प्रस्तुत हुन्छन। कहिले यी आनन्ददायी हुन्छन् भने कहिले पीडादायी हुन्छन्।
तनाव, व्यस्त जीवनशैली र प्रतिस्पर्धाका कारण मानिसमा निन्द्रा कम लाग्ने समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ। उत्पादनशील उमेरमा मात्र होइन, वृद्धावस्थामा यो समस्याले निकै सताउँछ। ओछ्यानमा गएपछि निदाउन धेरै समय लाग्ने, बारम्बार व्यूँझने, विहान चाँडै व्यूँझने आदि निद्राका समस्या हुन्।
हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यकालागि निद्रा अति आवश्यक हुन्छ। निश्चित समयमा भोक लाग्नु जस्तै हामीलाई निश्चित समयमा निद्रा लाग्छ। निन्द्रा विभिन्न किसिमका हुन्छन्। गहिराईका आधारमा निद्रालाई हलुका निद्रा, गहिरो र आरामदायी निद्रा तथा आँखाको गेडी हल्लिने निद्रा गरी तीन किसिममा बाँड्न सकिन्छ। खासगरी यी विभिन्न निद्रा हामी सुतेको बेलामा एकपछि अर्काे हुदै चक्रीय रुपमा आइरहेका हुन्छन्। हलुका निद्रामा कसैले वोलेको थाहा पाएर झसंग उठिन्छ।
आँखाको गेडी हल्लिने निद्रामा पनि यस्तै अनुभव हुन्छ। तर जव गहिरो निद्रामा परेपछि केही थाहा हुँदैन। यस्तो निद्रालाई भाते निद्रा पनि भनिन्छ। मस्तिस्कको आरामकालागि यो अति आवश्यक छ। मानव शरीरको स्वास्थ्यकालागि करिब ६ घन्टा निद्राको आवश्यकता पर्छ। वालक तथा विरामीलाई लामो निद्रा आवश्यक पर्छ। कहिलेकाहिँ १ दिनको निद्रा विथोलिएमा अर्काे दिन यसले असर देखाउँछ। त्यसैले एक दिनको निद्राले ७ दिन पिरोल्छ पनि भन्ने गरिन्छ।
धेरै मानिस आफूलाई निद्रा कम पर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। कसैलाई ओछ्यानमा पुगेपछि निद्रा लाग्न घण्टौ कुर्नुपर्छ। कोही चाहिँ चाँडै निदाउने गरे पनि बीचमा व्यूँझने गर्छन्, कसै कसैलाई निदाएर उठेपछि फेरि निदाउन गाह्रो हुन्छ। यसले गर्दा भोलिपल्टसम्म फुर्तिलो देखिँदैन। कोही निकै वढी निदाउने गर्छन्। कसै कसैलाई दिउँसो वढी निद्रा लाग्ने, निद्राले गर्दा काम गर्न गाह्रो हुने, पढ्न नसक्ने र पटकपटक कार्य स्थलमै निदाउने हुन्छ।
कसैकसैलाई निद्रामै शरीर चलाउन नसक्ने पनि हुन्छ। यो अवस्थामा अचानक निद्रावाट मानिस व्यूँझन्छ। त्यतिबेला आत्तिने वा सपनाकै कारण डराइरहने हुन्छ। त्यसबेला शरीर चलाउन सकिँदैन, वोल्न पनि सकिँदैन, त्यसैले निसासिए जस्तो लाग्छ। केही मिनेटपछि सपनाले पूरै छाडेपछि मात्रै बोल्न सक्ने हुन्छ र शरीर चलाउन सकिन्छ। यो अवस्थालाई सामान्य भाषामा ऐंठन परेको र गाउँघरमा वोक्सीले छलेको भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा यो सही होइन, यो निद्राको अवस्थामा देखिने प्यारालाइसिस हो जुन १–२ मिनेट मात्र रहन्छ।
यो समस्या बाहेक निद्रामा डराउने, आत्तिने, चिच्याउने, नराम्रो सपना देख्ने, भोलिपल्ट कुनै कुरा सम्झन नसक्ने हुन्छ। कोही कोही निदाएको वेलामा घरवाट वाहिर निस्कने र हिँड्ने गर्छन्। उनीहरु धेरै हिँडिसकेपछि मात्र चेत आउने र फेरि घर फर्कने गर्छन्। कसैकसैलाई निदाएको वेलामा पिसाव छुट्ने गर्छ भने कोही निद्राको वेलामा बर्बराउने, दाँत चपाउने, निद्रामा धुर्ने, खुट्टा हल्लाउने आदि गतिबिधि थाहै नपाइ गरिरहेका हुन्छन्।
धेरै मानिसमा उमेर ढल्कदै जाँदा निद्रा कम पर्ने हुन्छ। राती निद्रा नपर्नु अत्यन्त पीडादायी हुन्छ। मनमा अनेकौ कुरा खेल्छन् र दिमागले आराम पाउँदैन। छटपटी हुन्छ र वारम्बार पिसाव फेर्नुपर्ने हुन्छ। डर लाग्छ, पेट पोल्छ, खानामा अरुची हुन्छ, पसिना आउँछ र शरीरका मांशपेशी दुख्छन्। भोलिपल्ट मन कमजोर हुने र शरीर स्वस्थ्य नहुने हुन्छ। धेरै मनोरोगका विरामीहरु आफ्नो निद्रा गडवड भएको वताउँछन्। कतिपय स्वस्थ व्यक्ति पनि निद्रा नपर्नाले शारीरिक समस्या देखिएको बताउँछन्।
सुत्ने कोठा शान्त र हल्ला नहुने खालको हुनुपर्छ। बिहान उठेर दैनिक रुपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, दिउँसो नसुत्ने, सुत्नु अगाडि चिया, कफी नपिउने गर्नाले पनि निद्राको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। त्यस्तै वढी वा ज्यादै कम खानाले पनि निद्राको समस्या देखिन्छ। त्यसैले बेलुकाको खाना सन्तुलित रुपमा खाने गर्नुपर्छ। जहिले पनि एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। निद्रा लाग्ने वेलामा मात्र ओछ्यानमा जाने र जाँड रक्सी सेवन नगर्ने बानीले पनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
डिप्रेसन रोगका बिरामी गहिरो निद्रा नपरेको वताउँछन्। उनीहरु डरलाग्दो सपना देखेर आत्तिन्छन्। मेनिया रोगमा २ घण्टा सुते पनि उनीहरुलाई निद्रा पुग्छ। विरामी राति पनि टिभी हेरिरहने, कराउने र यताउता हिँड्ने गर्छन्। सिर्जाेफेनियाका विरामी रातभरी यताउता डुल्छन् र दिउँसो सुत्छन्। सन्तुलित भोजन र शारीरिक व्यायाम गर्ने मानिस राति राम्रोसँग निदाउँछन्। एक प्रकारको छारेरोग लागेका बिरामी अचानक ओछ्यानवाट खस्ने, शरीर कडा हुने, तन्किने, मुखवाट फिँज काढ्ने र १५ मिनेटपछि फेरि उठ्ने गर्छन्।
एन्जाइटी डिसअर्डर भन्ने रोगका बिरामी अँध्यारोमा डराउँछन। झ्यालढोका लगाउँदा आफू निसासिएजस्तो ठान्छन्। डराएर एक्लै वस्न सक्दैनन्। पुरानो अन्धविश्वासले गर्दा रात वढ्दै जाँदा भूत, वोक्सी आदि आउँछ भनेर डराउँछन्। तर त्यस्तो केही भएको हुँदैन। कोही निद्रामा वेसरी घुर्ने गर्छन्। मोटो शरीर, कम शारीरिक व्यायाम र रक्सी सेवनले गर्दा प्रायः यस्तो भएको हुन्छ। रात लामो हुँदा शरीरको मेलाटोनिन भन्ने हर्माेन वढी प्रवाह हुँदा जाडो महिनामा कसैमा डिप्रेसन रोग देखिएको छ। सामान्य निद्रा नपर्दैमा औषधि लिनु हुँदैन। औषधिबिना गरिने उपचार सफल नभए मात्र औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ। चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन। swasthayakhabar